ထူးအိမ်သင်ဖြူ ID ကိုကတ်, အဖြူရောင် ID ကိုထူးအိမ်သင် Card ကို, inductive ID ကိုကတ်, identification ကဒ်, Access Control Card ကို, 125kHz အဖြူရောင်ကဒ်, 125kHz Blank ကကဒ်, 125kHz ID ကိုကတ်
ID ကိုအဖြူရောင်ကတ်, 125kHz Blank ကကဒ်
EM ကဒ် / LF Card ကို 125kHz Blank ကကဒ်, 125kHz ID ကိုကတ်, Access Control Card ကို, identification ကဒ်, inductive ID ကိုကတ်, ထူးအိမ်သင်ဖြူ ID ကိုကတ်
125kHz ID ကို Blank ကကဒ်, အဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့, တန်ဖိုးနည်း access ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်သင့်လျော်သော.
ပစ္စည်း: ကို ABS, PVC
အထူ ID ကိုကဒ်တွေကို RF IC ကဒ်၏အရှိဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦး၏ ID နံပါတ် (ပုံနှိပ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် 18 ဂဏန်းသို့မဟုတ် 10 ဂဏန်း, 8 ဂဏန်းအရေအတွက်က), တစ်ဦးခရီးဆောင်အပေါက်နှင့်အတူ, ပုံနှိပ်ခြင်းလိုဂိုသို့မဟုတ်စာသားသတင်းအချက်အလက်များကိုပြနိုင်ပါတယ်.
ထူးအိမ်သင် ID ကိုကဒ်မျက်နှာပြင်နိုင်4အရောင် offset ပုံနှိပ်ခြင်း, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း, ပုံနှိပ်ခြင်းပုံတူ, ပုံနှိပ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် 18 ဂဏန်းသို့မဟုတ် 10 ဂဏန်း, 8 ဂဏန်းအရေအတွက်က.
ID ကိုပါးလွှာကဒ်များသောအားဖြင့် 125KHz EM4102 ကိုသုံးပါ, TK4100, TK4101 chip ကို, 13.56MHz chip ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်, ထိုကဲ့သို့သော FM11RF08 သို့မဟုတ် Mifare 1k S50 အဖြစ်.
အဆိုပါ 125KHz ID ကိုကဒ်အတွင်းရှိ induction ကွိုင်ကြီးမားတဲ့ rectangular ကွိုင်နှင့်မှရွေးချယ်ဖို့မြို့ပတ်ရထားကွိုင်ရှိပါတယ်. အနည်းငယ်ပိုရှည်အကြီးစား rectangular ကွိုင်ဖတ်အကွာအဝေး.
မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထား, အချိန်တက်ရောက်သူ, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ပေါက်ကိုယ်ရံတော်စနစ်က, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင်, ကင်းလှည့်စနစ်အား, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတစ်ခုမှာကဒ်ဖြေရှင်းချက်, နှင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်း IC ကဒ်စနစ်၏အခြားအ.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် ID ကိုအဖြူရောင်ကတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, 125kHz Blank ကကဒ်
prev: Temic Chip ကဒ်, Temic ဟိုတယ် Card ကို, Temic Encrypted ဟိုတယ် Card ကို
နောက်တစ်ခု: အနိမျ့ကြိမ်နှုန်း TI Chip ကဒ်, 134.2kHz TI Chip ကဒ်